Muhiimadda Istaraatiijiyada Suuq-geynta Fiidiyowga: Tirakoobka iyo Talooyinka | Martech Zone
Muhiimadda Istaraatiijiyada Suuq-geynta Fiidiyowga: Tirakoobka iyo Talooyinka
Jimco, Nofeembar 13, 2020 Jimco, Nofeembar 13, 2020 Douglas Karr
Waxaan kaliya wadaagnay faahfaahinta muhiimada ay leedahay suuq geyn muuqaal ah - iyo in, dabcan, ay ku jiraan fiidiyow. Waxaan u sameynay tanoo fiidiyow ah macaamiisheena dhawaanahan waxayna kordhineysaa kaqeybgalka iyo heerarka beddelka. Waxaa jira noocyo badan oo ah duubay, fiidiyowyo la soo saaray waad sameyn kartaa… hana iloobin video-ga waqtiga-dhabta ah ee Facebook, video-ga bulshada ee Instagram iyo Snapchat, iyo xitaa wareysiyada Skype. Dadku waxay cunayaan xaddi badan oo fiidiyoow ah.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Istaraatiijiyad Suuq Geyn Video ah
Youtube ayaa sii ahaanaya # 2 degel websaydh badan ka sokow Google. Macaamiishaadu waxay raadinayaan barxaddaas xalka… su'aashu waxay tahay inaad halkaas joogto iyo in kale.
Fiidiyowgu wuu ku caawin karaa fududee hawl aad u adag ama arin u baahan qoraal iyo sawir aad u tiro badan si faham loo helo. Fiidiyeyaasha Sharaxa ayaa sii wadaya beddelaadda shirkadaha.
Fiidiyowgu wuxuu bixiyaa fursad loogu talagalay dareenno badan… Aragtida iyo maqalka waxay wanaajisaa farriinta iyo sida daawadayaashaadu u arkaan.
Fiidiyowyadu way socdaan heerarka gujinaya-sare xayeysiiska, natiijooyinka mashiinka raadinta, iyo cusbooneysiinta warbaahinta bulshada.
Dadka ku jira hoggaaminta fikirka iyo markhaatifurka macaamiisha ayaa bixiya wax intaa ka sii badan saaxiib waayo aragnimo meesha kaftanka, soo jiidashada, iyo kalsoonidu sifiican loogula socodsiin karo daawadaha.
Fiidiyowgu wuu ka sii badnaan karaa madadaalo oo ku mashquulsan qoraalka.
Diiwaangelinta Suuq-galinta Wicitaanka
75 milyan oo qof oo Mareykan ah ayaa daawada fiidiyowyada internetka maalin kasta
Daawadayaashu waxay haystaan ​​95% farriinta markay ku jiraan fiidiyow marka la barbar dhigo 10% marka ay ku akhriyaan qoraalka
Fiidiyowga bulshada wuxuu abuuraa 1200% saami ka badan qoraalka iyo sawirrada la isku daray
Fiidiyowyada kujira Bogagga Facebook waxay kordhiyaan kaqeybgalka isticmaalaha dhamaadka 33%
Kaliya lagu xuso ereyga fiidiyow ee khadka maaddada emaylka waxay kordhisaa heerka gujiska-illaa 13%
Fiidiyowgu wuxuu kiciyaa 157% kororka taraafikada dabiiciga ah ee Boggaga Natiijada Mashiinka Raadinta
Fiidiyowyada gundhigga ah ee websaydhadu waxay kordhin karaan taraafikada illaa 55%
Suuqgeeyayaasha adeegsada fiidiyowga waxay koraan dakhli 49% ka dhakhso badan kuwa isticmaala fiidiyowga
Fiidiyowyadu waxay kordhin karaan beddelaadda bogga soo degitaanka 80% ama ka badan
76% xirfadleyda suuqgeyntu waxay qorsheynayaan inay adeegsadaan fiidiyow si ay u kordhiyaan wacyigooda astaanta
Sida istiraatiijiyad kale oo content ah, uga faa'iideyso fiidiyowga faa'iidadiisa ugu badan. Suuqyayaashu uma baahna inay heystaan ​​boqol fiidyow meeshaas… xitaa aragti guud oo hoggaamineed oo fikrad shirkadeed ah, fiidiyoow sharraxa ah oo sharraxaya wax adag, ama markhaati macaamilku ku yeelan karo saameyn aan caadi ahayn xeeladahaaga suuq-geynta dijitaalka ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka reebo marka loo eego sawir-gacmeedkan ayaa ah in dareenka dadka uu ka yaraaday kan kalluunka dahabka ah. Taasi si fudud maahan kiiska. Waxaan kaliya daawaday-daawaday hal xilli oo barnaamij ah dhammaadka wiigga… dhib kuma aha feejignaanta! Waxa dhacay ayaa ah in macaamiisha ay ogaadaan inay heystaan ​​fiidiyoow doorasho, sidaa darteed haddii aadan ka qabsanaynin dareenkooda oo aad ku hayso fiidiyowgaaga, waxay si fudud ugu dhaqaaqayaan meel kale ilbiriqsiyo gudahood.
Waa tan faahfaahinta, Muhiimadda ay leedahay Suuqgeynta Fiidiyowga, laga bilaabo IMPACT.
Tags: fiidiyowga blogbogga degitaanka fiidiyowgaFiidiyowyada Suuqgeyntasheyga sharaxaadda muuqaalkafiidiyowga warbaahinta bulshadafiidiyowga bulshadaurur -hoosaadnoocyada videosuuqgeynta fiidiyowgavideo seonoocyada fiidiyowgafiidiyowga webinargeesiyaasha shabakada
Douglas Karr Friday, November 13, 2020 Friday, November 13, 2020
AeroLeads: Ku Aqoonso Cinwaannada E-mayl Prospect adigoo adeegsanaya qalabkan 'Chrome Plugin'
Ujeeddo: Maareynta Barnaamijka Iskuxirka Iswadaarsiga ee Ecommerce